Raiisel wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhalleeceeyay weerarada uu ku tilmaamay in uu yahay mid fulaynima ah, kaas oo dhawaan lala beegsaday dhowr masaajid oo kuyaala bartamaha Amxaarada, isaga oo carabka ku adkeeyay in kooxaha xagjirka ah aysan ku guuleysan doonin in ay carqaladeeyaan khilaafka diineedka ee ka dhex jira itoobiya.
“Isku dayga kooxaha xagjiriinta ah ee lagu burburinayo taariikhdeena hodanka ku ah dulqaadashada diinta iyo wada noolaanshaha ma leh meel ku cusub Itoobiya oo doonaysa barwaaqo,” Abiy Axmed ayaa ku qoray bayaan lagu daabacay barihiisa “Facebook” iyo “Twitter”.
Raiisel Wasaaraha, oo ku guuleystey abaalmarinta Nabadda ee Nobel – ka, waxa uu sidoo kale yiri: “Waxaan cambaareynayaa ficiladaas fulaynimada ah, waxaan ugu baaqayaa dhammaan itoobiyada nabada jecel inay ka faa iideystaan aqoonteenna qotada dheer ee ku dheehan tahay wada noolaanshaha iyo qadarinta mujtamaceena.”
Sida laga soo xigtay raadiyaha iyo telefishanka dawladda, masaajidda ku yaal magaalada Muta, oo qiyaastii 350 km waqooyiga kaga began caasimada Addis Ababa, ayaa la weeraray, sidoo kale weerar ayaa lagu bartilmaameedsaday, kaniisad ku taal aaggaasi. raadiyaha iyo telefishanka dawladda, ma aysan cayimin goorta ay weeraradan dhacayeen.
Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, 80 qof ayaa lagu dilay, rabshado ka dhacayay gobolka Oromada, kuwaa oo ku lug yeeshay weerarada lala beegsanayo masaajidda iyo kaniisadaha ku yaala gudaha Amxaarada.
Wararkii ugu danbeeyey Magaalada Muqdisho
Xasan Cali Kheyre: isku day dil ayaan ka badbaadnay
Dibadbaxyo ay hogaaminayeen qaar kamid ah midowga musharaxiinta oo rasaas nool nool lagu kala eryay